““တကယ်မွှေးမှာလား ကံ့ကော်မြေ”” | ဥက္ကာကိုကို
Posted by oakkarkoko on January 20, 2013
““ကန်ရေပြင် မြေနီလမ်း… တို့နဲ့ဝေး… စွယ်တော်ခုံပြာတန်း တို့နဲ့ဝေး…
ယုံပါကွာ အချစ်ဆုံး မင်းကို… တို့တော့သတိရနေမှာပါ….. ”
လွန်ခဲ့သည့် ခြောက်ဆယ်စုနှစ်များက ကျောင်းဖွင့်ချိန် ဇွန်လမှာ မိုးစက်များ ခပ်ဖွဲဖွဲရွာနေလိမ့်မည်။ စိန်ပန်းတွေ လည်း ခပ်ရဲရဲပွင့်နေလိမ့်မည်။ အဓိပတိလမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ထီးရောင်စုံကိုယ်စီဖြင့် အဆင်အသွေးစုံကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ပျားပန်းခတ်နေလိမ့်မည်။ ဒီလမ်းမကြီးကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ခြေချခဲ့ကြလိမ့်မည်။
ပြီးတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရင်ခွင်ကို ခိုလှုံဖူးသူတို့ ဘယ်တော့မှမေ့မရနိုင်တဲ့ သစ်ပုပ်ပင်ကြီး၊ အဓိပတိလမ်းကို ၀င်ဝင်ချင်း ဘယ်ဖက်က မန္တလေးဆောင်ကြီး၊ ညာဖက်က ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျောက်တိုင်ပုလေး၊ ဂျပ်ဆင်ဘုရားကျောင်း ကြီး၊ ရွှေဘိုဆောင်၊ နာမည်ကျော်မာလာဆောင်၊ အင်းလျားဆောင်၊ ကိုအောင်ဆန်းနေဖူးတဲ့ ပဲခူးဆောင်စတဲ့ အဆောင် များ၊ အားလုံးရဲ့ပင်မဖြစ်တဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမဆောင်ကြီး၊ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကြီး…. ပြီးတော့… ကံ့ကော်ပင်တွေ၊ ဇွန်မိုးပိတောက်ပင်တွေ၊ တရုတ်စကားပွင့်တွေ၊ သစ်တိုပင်လမ်းလေး၊ ဦးချစ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ အင်းလျားကန်ပေါင်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာအထိမ်းအမှတ်နေရာများစွာက ခေတ်အဆက် ဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယခင်က တက္ကသိုလ်ကြီးထဲ ခြေချဖူးသူတို့၏ သတင်းစကားများ၊ တက္ကသိုလ်မှမွေး ထုတ်ပေးလိုက်သည့် စာရေးဆရာကြီးများ၏ ရေးသားဖော်ပြချက်များကိုသာ ယနေ့ခေတ်လူငယ်တို့ သိရှိကြားသိခဲ့ကြရ သည်။
တက္ကသိုလ်ကြီးအကြောင်း မည်သည့်အချိန်မှာပင်ကြားရစေတော့၊ ချက်ချင်းပင်ပြေးကြည့်၊ ပြေးတက်လိုက်ချင် သည့် စိတ်ကလည်း တဖွားဖွားပေါ်လာတတ်စမြဲဖြစ်သည်။ သို့သော် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပင် သူ့ရင်သွေးများ နှင့် ဝေးကွာနေခဲ့ရသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။
အမိရင်ခွင်မှ အမှတ်တရများကိုတော့ မည်သူမှမမေ့နိုင်ကြ။
““ကြင်နာသူတွေရဲ့ ကံ့ကော်တန်း… ခြေရာထင်ကျန်ဆဲ အဓိပတိလမ်း….
ရင်မှာသံမှိုစွဲနှလုံးအိမ်ထဲ… တို့တော့သတိရနေမှာပါ…. ””
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မဂိတ်ပေါက်မှ လှမ်းဝင်လိုက်သည်နှင့် အဓိပတိလမ်းမကြီးကခန့်ထည်စွာ ဆီးကြိုပါလိမ့် မည်။ ယခုအခါ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် အဓိပတိလမ်းသည် ၀ဲယာတစ်ဖက်တစ်ချက် မီးတိုင်သစ်များ၊ ကတ္တရာသစ်များ ၊ ပလက်ဖောင်းသစ်များ၊ မြက်ခင်းသစ်များဖြင့် ကြည့်ကောင်းနေပေသည်။ ၀င်ဝင်ချင်းညာဖက်ကို လှည့်ကြည့်ပါက ဗိုလ် အောင်ကျော်အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်ငယ်လေးကို တွေ့ရပါမည်။ ဒီမြေမှမွေးထုတ်ပေးလိုက်သော သမိုင်းဝင်ကျောင်း သားသူရဲကောင်းတစ်ဦးကို မေ့ပျောက်မရနိုင်သည့် သက်သေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်ပါက New Hall ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသော မန္တလေးဆောင်၊ အမရဆောင်၊ ရာမညဆောင်၊ တောင်ငူဆောင်တို့ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အဓိပတိလမ်းမတစ်လျှောက်တွင် တက္ကသိုလ်ရုံး၊ ရွှေဘိုဆောင်၊ ဒဂုံဆောင်၊ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်နှင့် သိပံ္ပ၊ ၀ိဇ္ဇာစာသင်ဆောင်များရှိကြသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းပုံ အတိုင်း တည်ထောင်ထားသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ အဓိပတိ လမ်းမကြီးသည် ယနေ့ထက်တိုင်ပင် သစ်ရွက်ခြောက်များ တဖွဲဖွဲကြွေဆင်းဆဲဖြစ်သည်။ သူ့ရင်ခွင်ပေါ်နင်းဖြတ်လာမည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့၏ ခြေသံများကိုလည်း နားစွင့်နေ ဆဲဖြစ်ပါသည်။
အထီးကျန်သော်လည်း အကျည်းမတန်သည့် ကျောင်းဆောင်များ
ရန်ကုန်ကောလိပ်အဆောက်အအုံများကို ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးအဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခမှာ မစ္စတာအမ်ဟန်းတား ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား ၈၂၉ ဦးစတင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
သထုံ၊ ပဲခူး၊ ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ စစ်ကိုင်းကျောင်းဆောင်များသည် Central Hall ပင်မကျောင်းဆောင်များဖြစ်ပြီး ၁၉၂၈ ခုနှစ်အတွင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ပြည်၊ တကောင်းနှင့် ပုဂံဆောင်များကို ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၀ိဇ္ဇာ နှင့် သိပ္ပံစာသင်ဆောင်များအပါအ၀င် ရွှေဘိုဆောင်၊ ဒဂုံဆောင်၊ သီရိဆောင်များကို ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
New Hall ဟုခေါ်သည့် မန္တလေး၊ အမရ၊ ရာမည၊ တောင်ငူဆောင်များ၊ မာလာဆောင်၊ ရတနာဆောင်၊ အင်းလျား ဆောင်တို့ကို လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးတွင်မှ ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ သထုံလမ်းဖက်တွင် ပညာရေး ကျောင်းသူများနေထိုင်သည့် တီတီစီကျောင်းဆောင်(နှင်းဆီကုန်း)လည်းရှိသည်။
လက်ရှိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေကြီးကို ၁၉၂၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှစတင်ကာ ဧက ၇၀၀ နှင့် ၈၀၀ အကြားကျယ်ဝန်း သည့် သရက်နှင့်မရမ်းခြံများကို ခုတ်ထွင်၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်လက်ရာ အဆောက်အအုံနီနီကြီးများ၏ အခန်းငယ်များထဲမှ စာအံသံများပေါ်ထွက်ခဲ့ဖူးသည်။ ဂစ်တာသံများ၊ ပျော်ရွှင်စွာရယ်မောသံများ ပေါ်ထွက်ခဲ့ဖူးသည်။ တေးသီချင်းများစွာဖြင့် အဆောင်သူတို့အိပ်မက်တွေ လှပ ခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များသည် ထိုအဆောင်များထဲမှပင် ပေါ်ထွက်လာကြသည်။ အနုပညာရှင်များစွာသည် ထိုအ ဆောင်များထဲမှာ သန္ဓေတည်ခဲ့ကြသည်။ စာပေပညာရှင်များသည် ထို အဆောင်များထဲမှာ ဥာဏ်ကွန့်မြူးခဲ့ကြသည်။
ပဲခူးဆောင်မှ ကိုအောင်ဆန်း နေထိုင်ခဲ့သည့် အခန်းငယ်လေးကို တန်ဖိုးထားခဲ့ကြသည်။
မည်သို့မျှ မေ့ပျောက်မရနိုင်သော အဆောင်ဟောင်းကြီးများထဲမှာ ကြီးမားသောသမိုင်းကြောင်းတွေရှိသည်။ မြန် မာတစ်နိုင်ငံလုံး၏ အနာဂတ်အဆုံးအဖြတ်သည် ထိုအဆောင်ဟောင်းကြီးများထဲမှ ပေါ်ထွက်လာဖူးသည်။ ယခင်က စည် ကားသိုက်မြိုက်ခဲ့ဖူးသည့် အဆောင်ဟောင်းကြီးများသည် ယခုအခါ ခြောက်သွေ့နွမ်းလျလျှက်ရှိသည်။ လူတွေကလည်း နေထိုင်သည်ဆိုရုံ၊ ရှိသည်ဆိုရုံမျှ။
ထိုသို့နှစ်ပေါင်းများစွာအထီးကျန်နေခဲ့သော်လည်း အဆောင်များအားလုံးသည် အကျည်းမတန်သေးပါ။ ခန့်ငြား ထည်ဝါလျှက်ပင်ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိ အဆောင်များကို ပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေ သည်ကို တွေ့ရသည်။
သမိုင်းကြောင်းကို ငုံ့ကြည့်နေဆဲ သစ်ပုပ်ပင်ကြီး
အဓိပတိလမ်းမထက်မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စတည်စဉ်ကတည်းက ရှိနေခဲ့သည့် သစ်ပုပ်ပင်ကြီးကို တွေ့ရပါမည်။ မလှမ်းမကမ်းမှာ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကြီးက ထည်ဝါစွာရပ်တည် လျှက်ရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်လာပြီဖြစ်သည့် သစ်ပုပ် ပင်အိုကြီးသည် ရာသီဥတုဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံဆဲဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်စရာ၊ လွမ်းဆွတ်စရာ၊ ၀မ်းနည်းစရာ၊ ကြေကွဲစရာ၊ နာကျည်းစရာဇာတ်လမ်းတွေ၊ မေ့ပျောက်ပစ်ဖို့မလွယ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ သစ်ပုပ်ပင်ကြီးဆီမှာ အများကြီးရှိသည်။
တက္ကသိုလ်နယ်မြေမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းသည် သစ်ပုပ်ပင်ကြီးနှင့် ထိတွေ့ရင်းနှီးခဲ့ကြသည်။ သူ့အရိပ် အောက်မှာ ခိုဝင်ခဲ့ကြသည်။ သူ့ပင်စည်နံရံမှာ စာထွင်း၍ တစ်သက်တာ အမှတ်တရများကို ရေးခြစ်ခဲ့ကြသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့်အတူ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေအတွင်းမှ သက်တမ်းရင့်သစ်ပင်ကြီးများစွာ ပြိုလဲခဲ့ရသည်။ ထိုစဉ်က ကျောင်းသားဟောင်းများသာမက ပြည်သူအများက သူတို့ချစ်သော သစ်ပုပ်ပင်ကြီးကို စိုးရိမ်တကြီးဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်တွဲမြင်ရသည့် ကြီးမားသောဂုဏ်ပုဒ်တစ်ရပ်ကြောင့် သစ်ပုပ်ပင်ကြီးအဆုံးသတ်သွားမှာကို စိုးထိတ်ခဲ့ ကြသည်။ သစ်ပုပ်ပင်ကြီးရှိနေဆဲပါ။ နောင်လည်းရှိနေပါဦးမည်။ သူ့အရိပ်အောက်ရောက်ရှိလာမည့် ကျောင်းသားသစ်များ ကို ငုံ့ကြည့်နေပါလိမ့်ဦးမည်။ အားလုံး၏ မေတ္တာများနှင့်အတူ သူရှင်သန်နေပါလိမ့်ဦးမည်။
အမေရိကန် ဘက်ပတစ်သူနာပြုအဖွဲ့ကထူထောင်သော ဘက်ပတစ်ကောလိပ်သည် ၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင် ပေါ်ပေါက် ခဲ့သည်။ အဆိုပါကောလိပ်ကို ယုဒသန်ကောလိပ်ဟူ၍ ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင်အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယုဒဿန်ဘုရားကျောင်း ကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဂျပ်ဆင်ခန်းမ၊ ဂျပ်ဆင်ဘုရားကျောင်းဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၂၀ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေအရ ရန်ကုန်ကောလိပ်နှင့် ယုဒသန်ကောလိပ် နှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းကာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟူ၍ ပေါ် ထွန်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပ်ဆင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ ယနေ့ထက်တိုင် တနင်္ဂနွေနေ့ တိုင်း လူစည်ကားဆဲဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အဖွဲ့က ဂျပ်ဆင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ မြန်မာကျောင်းသားကြီးများကလည်း တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းနှင့် လှည်းတန်းမီးပွိုင့်အနီးရှိ တက္ကသိုလ်ဓမ္မာရုံကြီးကို ၁၉၃၁-၃၂ တွင် တည်ဆောက်ပြုပြင်ခဲ့ကြသည်ဟုသိရသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေအတွင်းက ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မာရုံကြီးတို့ နှစ်ခုစလုံးသည် ယခုအခါ အိုမင်းလာကြပြီဖြစ်သည်။ သမိုင်းဝင်နေရာများအဖြစ် တည်ရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။ ဂျပ်ဆင်ဘုရားကျောင်းထိပ်မှ လရိပ်ကတော့ သာဆဲပင်။
““အိမ်ပြန်ချိန် တို့ခွဲ…. တစ်လမ်းစီမို့…. ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြနိုင်ဖို့….. ကံကိုသာမျှော်လင့်ရင်းအဝေးက..
တို့ သတိရနေမှာပါ…. ””
ရေပြင်သည် လေအသော့တွင် လှိုင်းကြက်ခွပ်လေးများလှုပ်ကာလှုပ်ကာဖြင့် အမြင်တင့်နေဆဲပင်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားနှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတို့၏ ချစ်သူ့နယ်မြေဖြစ်သော အင်းလျားကန်ပေါင်သည် တစ်သက်တာလက်တွဲ ရမည့် အိမ်ထောင်ဖက်ကိုလည်း ရွေးချယ်ပေးလိုက်လေ့ရှိသည်။ အင်လျားကန်ပေါင်ထက်မှ ကျောင်းသားတို့၏ ခြေရာများ သည်လည်း မေ့ပျောက်မရသည့် အမှတ်တရများထဲမှ တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
အင်းလျားကန်ပေါင်အောက်ဖက်၊ ပြည်လမ်းပေါ်မှ တံတားဖြူမှတ်တိုင်ကတော့ စနစ်ဆိုးအောက်မှာ သွေးစက်တို့ ဖုံးလွှမ်း၍ တံတားနီအဖြစ် အတိတ်ဆိုးတွင်ခဲ့ရသည်။ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုဖုန်းမော်နှင့် ကိုစိုးနိုင်တို့ကျဆုံးခဲ့ရ သည့် ၁၉၈၈၊ မတ်လ ၁၃ ရက်(တံတားနီအရေးအခင်းနေ့)ကို တံတားဖြူမှတ်တိုင်နဲ့ အင်းလျားရေပြင်ကြီးက ဘယ်တော့မှ မမေ့။
တစ်ချိန်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်လျှင် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့ သည်။ ၁၉၄၀ မတိုင်မီအထိ နိုင်ငံရပ်ခြားနိုင်ငံတချို့မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် လာ ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ကြရသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခဒေါက်တာလုစ်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးဦးဖေမောင်တင်၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၊ ဆရာ ဇော်ဂျီ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ်၊ ဆရာတိုက်စိုး၊ ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာထင်အောင်တို့အပြင် အင်္ဂလိပ်စာဆရာ ဦးခင်မောင်လတ်၊ ဒဿနိကဗေဒပါမောက္ခဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း၊ ယခုနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အကြံပေး ဦးမြင့်(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) တို့ အထိ ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြသည်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ အပြောင်းအလဲများ၏အစနှင့် တိုက်ပွဲခေါ်သံ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဖွင့်ဖွင့်ချင်းပင် ဆောက်နှင့်ထွင်းခဲ့ရ သည်။ ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့်တက္ကသိုလ်နှင့်အတူ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည့် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့အစိုးရ၏၁၉၂၀ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် ကျောင်းသားကြီး ၂၆ ဦးခေါင်းဆောင်၍ ပထမကျောင်းသားသပိတ်ကြီးကို ၁၉၂၀ ဒီဇင် ဘာ ၅ ရက်နေ့(တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၁၀ရက်) နေ့တွင် စတင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။ ထိုသပိတ်၏ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် ယနေ့နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ်ထားသော အမျိုးသားနေ့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
၁၉၃၈၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် ဒုတိယကျောင်းသားသပိတ်တွင် အတွင်းဝန်များရုံးကိုကျောင်းသားများဝိုင်းဝန်းဆန္ဒ ပြခဲ့ကြရာမှ မြင်းစီးပုလိပ်များ၏ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျဆုံးခဲ့ရ သည်။
ကိုကြီးနု၊ ကိုအောင်ဆန်း၊ ကိုသိန်းဖေ၊ ကိုသိန်းတင်(ညိုမြ)တို့သည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို ဦးဆောင်၍ နယ်ချဲ့ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်တွင်လည်း ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အသီးသီးသည် ကျောင်းသားအခွင့်အရေးသာမက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတို့တွင် ရှေ့တန်းမှဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကြစမြဲ ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဖြင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်တွင် စစ်အာဏာရှင်နေ၀င်း၏ တပ်များက သမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦကို မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးရုံသာမက ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ရာနှင့်ချီကျဆုံးခဲ့ရသည်။ တပ်ဦး+ရဲခေါင် ဟူ၍ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုဖြိုခွဲခဲ့သော်လည်း ကျောင်းသားများ နောက် မတွန့်ခဲ့ကြပေ။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဦးသန့်အရေးအခင်းနှင့် ၁၉၇၆ ခုနှစ် မှိုင်းရာပြည့်အရေးတော်ပုံတို့တွင် ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခံ ကြရသော်လည်း ကျောင်းသားများဦးမညွှတ်ခဲ့ကြပေ။
ထိုအတောအတွင်းမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကလည်း ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် လုံထိန်းများ၏ လက်ချက်ဖြင့် ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော်၊ ကိုစိုးနိုင်တို့ ကျဆုံးခဲ့ရ ပြီး ယင်းနေ့ကို တံတားနီအရေးအခင်းနေ့အဖြစ် ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူများက သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှစ၍ ကျောင်းသားအရေးအခင်းများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီး ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးလည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသည်။
၁၉၉၆၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ပြီး ကျောင်းသားသပိတ်တစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်သစ်များကို ရန်ကုန်မြို့ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်များ၏ အပြင်ဖက်သို့တိုင် ပြောင်း ရွှေ့တည်ဆောက်ကာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ဝေးလံစွာတက်ရောက်စေခဲ့သည်မှာ ယနေ့ထိတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားများသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး သံဃာ့အရေးအခင်းကြီးတွင်လည်း သံဃာထုနှင့် အတူပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲနှင့် ကြီးမားသောလှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားများက အမြဲပင် တိုင်းပြည်အတွက်ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကြလေသည်။
““လိုင်ဘရီလေးလည်း တို့နဲ့ဝေး…. အာစီလေးလည်း သတိရမိတယ်…. ရင်မှာလွမ်းလို့ ကျတဲ့မျက်ရည်…
နှစ်များစွာကြာအောင် စွန့်ပစ်ခြင်းခံထားရသည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြေသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာတော့မည့် သဏ္ဍာန်များကို ခပ်ရေးရေးတွေ့လာရသည်။
အမေရိကန်သမ္မတဘားရတ်အိုဘားမား၏ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်ခရီးစဉ်တွင် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမအတွင်း မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အား ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပြန်လည်အာရုံစိုက်မိလာကြခြင်းကလည်း တက္ကသိုလ် နယ်မြေ၏ ပြန်လည်ရှင်သန်မှုအတွက် ရောင်နီတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။
ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်လာသည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် နေဆဲဖြစ်သော်လည်း အများစုသောကျောင်းဆောင်များကတော့ သော့ခတ်ထားဆဲ။
ထိုကျောင်းဆောင်များသည် တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကို ဖန်တီးမည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို စောင့်ကြိုနေပါ သည်။ အဓိပတိလမ်းမကြီးသည်လည်းကောင်း၊ သစ်ပုပ်ပင်ကြီးသည်လည်းကောင်း၊ ဂျပ်ဆင်အိုကြီးသည်လည်းကောင်း၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကြီးသည်လည်းကောင်း တစ်ချိန်က အရှေ့တောင်အာရှတွင် လက်မထောင်နိုင်ခဲ့သည့် ပညာရေးစနစ်တစ် ရပ်နှင့် ပညာရည်နို့သောက်စို့ကြမည့် ရင်သွေးများကို မျှော်လင့်နေပါသည်။
ကံ့ကော်ပန်းများ ပင်လုံးကျွတ်ဝေေ၀ဆာဆာပွင့်လာမည့် တစ်နေ့တွင် အဓိပတိလမ်းမကြီးပေါ်၌ တက်ကြွသော ခြေသံများနှင့် လတ်ဆတ်သောရယ်သံချိုချိုများ ပျံ့လွင့်လာပါလိမ့်ဦးမည်။ ရွက်ခြောက်များကတော့ တဖွဲဖွဲကြွေနေဆဲ။
← ““ဘိုင့် ဘိုင် ချက်ကြီး””
““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း””(ပထမပိုင်း) →